Ogologo na anya na arọ tọghatara Tools | Save A Train
Ogologo na anya na arọ tọghatara Tools
Home > Ogologo na anya na arọ tọghatara Tools
ogologo Ntụgharị – ibu akakabarede – anya tọghatara – Isi Mass Index tọghatara – Okpomọkụ akakabarede ngwaọrụ.
Smart Universal Units Nchigharị N'ihi Anya, Oge, Okpomọkụ na ndị ọzọ
Nke a eluigwe na ala unit Ntụgharị ngwá ọrụ ga-nyere gị aka iji tọghata anya, tọghata oge, Ihe ntụgharị, na ndị ọzọ, ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma, jiri ndọpụta ka ịhọrọ mpaghara nke ziri ezi iji tọghee site na.
Ibu tọghatara Ngwá Ọrụ
Nke a nkeji tọghatara ngwaọrụ wijetị ga-enyere gị aka ịrụ unit tọghatara nke dị iche iche nke igwe n'agbanyeghị ihe pịnye ha dị ka ngwa ngwa dị ka a Lightning, dị nnọọ tinye nọmba nke ziri ezi na-nri ebe na-asọ ndị tọghatara button.
Họrọ otu Ibu Ibu
Ogologo Ntụgharị Ngwa
Ọzọ ọzọ unit akakabarede ngwá ọrụ dị maka ogologo tọghatara na anya tọghatara nkeji mgbe ị kwesịrị a kpọmkwem maka anya ị nwere ike tọghata, ọ nwere niile na nhọrọ na ị chọrọ gbakọọ na tọghata anya na ajụjụ.
ogologo / anya Ntụgharị
Unit Ntụgharị maka ogologo
Isi Mass Index Nchigharị App
Taa anyị na-niile maara banyere ahụ ike anyị, ka ọ bụ ezie na ị na-na ezumike, -enwe ma na-eji anyị na Isi Mass Index – Ọtụtụ BMI Ntụgharị ngwá ọrụ, ya mere, ị hụla na ị ka dị na odidi mgbe ị na-ekpori ndụ.
Bara uru maka afọ 20 ma ọ bụ okenye.
Ibu ibu gi:
Chọpụta ihe na Wikipedia
Ihe Nlereanya Of Mgbe Iji jiri anyị Nchigharị Tools:
Tụọ akakabarede nke uka na ibu ibu:
Mgbe gị na nwa ewu chọrọ ịga na a igwe na-agba okirikiri, Mgbe ụfọdụ, ị ga-jụrụ ya ibu na mpaghara ibu ụfọdụ, anyị n'elu nkeji Ntụgharị ngwaọrụ ga-enyere gị idozi a maze.
Anya na ogologo Ntụgharị:
Ka anyị kwuo na ị chọrọ gbakọọ ogologo oge ọ ga-ewe gị site na otu si ọzọ, ma na ị dị nnọọ rutere mba ebe kilometa a na-eji, NSOGBU ADỊGHỊ, nanị tinye na kilometa unit ngwá ọrụ, na na ọ ga-tọghata ihe na ị maara na nke a ikpe, ga-kilomita.
Okpomọkụ nkeji Ntụgharị ngwá ọrụ:
Ị chọrọ ịmara ihe abịa maka gị na njem, na ị na-amaghị ma ọ bụrụ na ọ bụ Celsius ma ọ bụ Fahrenheit, nke ọ bụla, anyị okpomọkụ nkeji Ntụgharị, ga-enyere gị ịnyagharịa mmiri a.
Uwe nha Ntụgharị:
Yabụ ị bịarutere na ịzụ ahịa akụkụ nke njem gị, na ị na-enweghị echiche, ihe bụ akpụkpọ ụkwụ unit size, anyị nwere gị ihe ngwọta maka ị, dozie a unit Ntụgharị nke otú i nwere ike nweta nri akpụkpọ ụkwụ, nri uwe elu, na-azụ ma na-egosi anya ka ndị enyi gị ihe ị nwetara na gị njem.
– E nwere ọtụtụ ihe atụ ndị na ebe ị nwere ike iji anyị nkeji converters, e nwere nanị ụfọdụ n'ime ikpe.
Na Save A Train anyị na-eche banyere ụgbọ okporo ígwè anyị njem blog na-agụ akwụkwọ na ụgbọ okporo ígwè ntinye akwụkwọ website ahịa, otú anyị akp anyị njem ngwá ọrụ na anyị na-na-ulo oru ihe mara nkeji Ntụgharị ngwa n'ihi na ị na-ahụ ya mfe iji tọghata arọ, ma nwekwara ike ịrụ ọsọ tọghatara, Anya tọghatara na okpomọkụ tọghatara, na ọtụtụ ndị ọzọ nkeji tọghatara na ndị dị iche iche si n'ụlọ gị na obodo ebe ị ejegharị ejegharị na-.
Anyị Ogologo Ntụgharị na anya Ntụgharị Na arọ Ntụgharị Tools nwere mfe iji ihu otú ị ga-adịghị mkpa na-ala n'iyi karịa 5 sekọnd mgbe seeings ụfọdụ unit nọmba na mkpa unit tọghatara na otú i nwere ike ime ka gị onwe gbakọrọ mkpebi ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi.
Anyị nwere ọtụtụ ngwaọrụ maka gị:
Kalinda ezumike, chọta ụbọchị ezumike dị mfe dịka o kwere mee.
Ngwaọrụ Weather, Ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ na-eche maka ihu igwe ihu igwe ma ọ bụ ogo ebe ọzọ, Nke a bụ maka gị.
Oge nyocha, ihe kachasị nghọta iji chọpụta oge ebe niile!
Mgbako ego, n'ikpeazụ onye na-agbanwe ego na ihe mgbako dị mfe iji.
Carbon Akara Aka Validator, mara kpọmkwem ego ole ị meere mbara ala dabere n'ụdị njem ị họọrọ
Egwuregwu Map njem, were obere odo nwoke, ịdọrọ gaa ebe ọ bụla n'ụwa ma hụ ezigbo foto sitere n'ike mmụọ nsọ.
Ndepụta maka ndị njem, ihe mmekorita nke na enye gi ohere ichoputa udiri njem gi na ihe kpatara, na ozugbo ị banyere nkọwa, ị ga-enweta ndepụta nyocha nke ihe ị ga-eweta.
Calculator Nkwụ ụgwọ njem, Họrọ mba site na ndọpụta, ma hụ ego ole ga-efu gị kwa ụbọchị iji gaa mba ọ bụla n’ụwa.
Na-azụ Egwuregwu, Bụrụ onye na-anya ụgbọ oloko ma gbaa ụgbọ oloko na-aga ebe ha na-aga, egwuregwu na-atọ ụtọ maka egwuregwu niile.
Ì nwere obi ụtọ na anyị Units converters ngwaọrụ, anyị na-atụ ị na-eme, na ọ bụrụ na ị na-eme, anyị ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị na-akwado anyị azụ na-eji ụgbọ okporo ígwè anyị Ịnye tiketi Engine nke nwere Best na ọnụ ala Train Tickets Ahịa, Save A Train.
Ị chọrọ Embed a page jidesie gị na saịtị, dị nnọọ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Funits%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / de na / ma ọ bụ na / nl na ndị ọzọ asụsụ.